NW-Pacific « MMWeather Information BLOG
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း PEIPAH – 05W အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်
By Win Naing, on April 8th, 2014%
ဧပြီလ ၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်သမုဒ္ဒရာတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် PEIPAH(05W)ဟု ပေးထားပြီး ဖြစ်ကာ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားရင်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။ PEIPAH သည် ဧပြီလ ၁ဝ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေအနီးသို့ ရောက်ရှိစဉ် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေအား ဧပြီလ ၁၂ ရက်မှ နောက်ပိုင်းတွင် စတင်၍ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟု GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်လျော့ကျကာ ဧပြီလ ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Sulu ပင်လယ်ပေါ်၌ အားပျော့ပျက်ပြယ်သွားမည်ဟု ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များမှ ခန့်မှန်းထားသော်လည်း တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းမှ အားကောင်းသော လေစီးကြောင်းအခြေအနေများကြောင့် ပြန်လည်၍ အားကောင်းလာနိုင်ခြေ . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း PEIPAH – 05W အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W, NW-Pacific, PEIPAH ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဦးတည်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) မုန်တိုင်းဖြစ်လာတော့မည်
By mmweather.ygn, on April 4th, 2014%
ပစိဖိတ် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W FIVE သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲပိုင်းမှ စတင်၍ အပူပိုင်း မုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် – ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှတစ်ဆင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC နှင့် TSR တို့မှ ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ချက်များတွင် တွေ့ရပါသည်။
ဧပြီလ ၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၇၄ဝ သို့ ရွေ့လျား ရောက်ရှိချိန်၌ မုန်တိုင်း 05W(FIVE)သည် အင်အား အကောင်းဆုံး(ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 60 knots)သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဦးတည်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) မုန်တိုင်းဖြစ်လာတော့မည်
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 05W, NW-Pacific, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် TD-FIVE
By mmweather.ygn, on April 3rd, 2014%
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း ဂူအမ်ကျွန်းတောင်ဘက် ၈၃ဝ မိုင်ခန့် တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး ဧပြီလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ မတိုင်မီ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အဆင့်-၁(CAT-1) တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းသို့ အဆိုပါနေ့နောက်ပိုင်းတွင် စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ဦးတည် ဖြတ်ကျော်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း JTWC,TSR, NRL အစရှိသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုးလေဝသခန့်မှန်းရေးဌာနများမှ ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များတွင် တွေ့ရပါသည်။
ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိပြီးနောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဘွယ် ရှိ/မရှိ စောင့်ကြည့် . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် TD-FIVE
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 05W, FIVE, NW-Pacific, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်း အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on July 20th, 2013%
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းတွင် ထူးခြားသည့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်မှု မရှိသော်လည်း ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပင်လယ်ပြင်များ(တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တို့တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်(INVEST SYSTEM)များ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ပုံတွင် ၂၄ နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ(ဇူလိုင် ၂ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၃း၃ဝ နာရီအထိ) နှင့် INVEST SYSTEM များ ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေကို ဖေါ်ပြထားပါသည်။
၂၄ နာရီ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ Data များကို ပုံဖေါ်ရရှိချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ နည်းပါးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ် ဒေသအချို့တွင် မိုးများခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ နေ့စဉ်မိုးလေ၀သသတင်း (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ . . . → Read More: အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်းနှင့် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဒေသတွင်း အခြေအနေ
Leaveacomment ၂၄ နာရီ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေအနေ North Indian Ocean, NW-Pacific, rainfall-24hr ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း SOULIK-07W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on July 8th, 2013%
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အပူပိုင်း မုန်တိုင်း SOULIK(07W) စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းသည် ဆက်လက် အားကောင်းလာပြီး လာမည့် ၇၂ နာရီအတွင်း(ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီတွင် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်မုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိကာ အနောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ သိရပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် ယခု လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက် ရွေ့လျားပါက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ(လူဇုန်ကျွန်း) မြောက်ပိုင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ရုကျု(Rukyu Islands) နှင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့အနီးသို့ သို့ ယခု သီတင်းပတ်အကုန်ခန့်တွင် ရောက်လာဘွယ်ရှိကြောင်း . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း SOULIK-07W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 07W, NW-Pacific, SOULIK, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက် ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိမည်
By mmweather.ygn, on February 19th, 2013%
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 02W(TWO) သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းစွန်းအား ဖြတ်ကျော်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း(ဖေဖေါ်ဝါရီလ-၂၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ မတိုင်မီ) တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာက ပိုမိုအင်အားကောင်းလာနိုင်ကြောင်း၊ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း JTWC နှင့် NRL data များ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
02W TWO 19 Feb 2013 0000Z Location: 5.2 126.1 Winds: 25 knots Central Pressure: 1004 hPa
JTWC ခန့်မှန်းချက် TEXT LINK TROPICAL DEPRESSION (TD) 02W, LOCATED . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိမည်
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 02W, NW-Pacific, South China Sea တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာဦးမည့် အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း BOPHA
By mmweather.ygn, on December 2nd, 2012%
ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data အရ – ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဂူအမ်ကျွန်း၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၆၃ဝ ခန့်၊ Palau ကျွန်း ၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃၉ဝ ခန့်၊ အနီးဆုံ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေမှ မိုင် ၁ဝဝဝ ခန့် ကွာဝေးသည့် နေရာတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အားအလွန်ကောင်းသောတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း BOPHA(26W) သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၃ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၄ ရက်(အင်္ဂါနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း BOPHA သည် လာမည့် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာဦးမည့် အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း BOPHA
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 26W, BOPHA, NW-Pacific, TYPHOON စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT အိုကီနာဝါကျွန်းသို့ ဦးတည်
By mmweather.ygn, on September 28th, 2012%
အားအလွန်ကောင်းသော စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT(ဖိလစ်ပိုင်အမည် LAWIN) သည် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ စတင်၍ ချိုးကွေ့ပြီး အိုကီနာဝါကျွန်းများဆီသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပါသည်။
မုန်တိုင်း JELAWAT ၏ အဖျားပိုင်းသည့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် အိုကီနာဝါကွန်း နောက်တောင်ဘက်ရှိ Miyako Jim ကျွန်းများကို စတင်၍ တိုက်ခတ်လျှက်ရှိနေပြီး မြို့တော် တိုင်ပေ၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၃၀ ကျော်၊ အိုကီနာဝါမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၄၀ ကျော် တွင် ဗဟိုပြုလျှက် အိုကီနာဝါကျွန်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး JELAWAT သည် အချင်း ၁၀၉၀ ကီလိုမီတာ(မိုင် ၆၇၀ ခန့်) ရှိသည့် အလွန်ကြီးမားသည့် အရွယ်အစားရှိပြီး ၄င်း၏ . . . → Read More: စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT အိုကီနာဝါကျွန်းသို့ ဦးတည်
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 18W, 19w, EWINIAR, JELAWAT, NW-Pacific, super typhoon, TYPHOON CAT-5 စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာသည့် JELAWAT
By mmweather.ygn, on September 25th, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT(18W-ဖိလစ်ပိုင် အမည်ဖြင့် LAWIN) သည် အဆင့်-၅ စူပါတိုင်မုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီးး၊ မနီလာမြို့တော် အရှေ့ဘက် မိုင် ၄၆၀ ခန့်၊ အိုကီနာဝါကျွန်း၏ တောင်ဘက်စူးစူး မိုင် ၇၂၀ ခန့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။
အဆင့်-၅ စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး JELAWAT သည် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်း တစ်နာရီ ၃၁၅ ကီလိုမီတာ(၁၇၀ နော်တီကယ်မိုင်နှုန်း) ရှိကာ၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၄၂ ပေရှိကြောင်း သိရပါသည်။ မုန်တိုင်း အရွယ်အစားမှာ အချင်း ၄၂၀ . . . → Read More: CAT-5 စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာသည့် JELAWAT
Leaveacomment မုန်တိုင်းသတင်း 18W, 92W, JELAWAT, LAWIN, NW-Pacific, super typhoon, TYPHOON အားကောင်းသော အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာသည့် JELAWAT
By mmweather.ygn, on September 23rd, 2012%
စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၃၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း JELAWAT(18W) ဖိလစ်ပိုင်အမည် LAWIN သည် ပိုမိုအင်အားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိကာ မုန်တိုင်းမျက်စေ့ ထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT သည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ လမ်းကြောင်းရွေ့လျားပြောင်းလဲမှုကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေဖြင့် မုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခံရမည့် အန္တရာယ်မှ ကင်းလွတ်ပြီဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းနှင့် မကြာသေးမီက စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး SANBA ဝင်ရောက်တိုက်ခံခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် အိုကီနာဝါကျွန်းတို့အတွက် အန္တရာယ်ရှိလာသည့် အခြေအနေကို ရောက်ရှိလာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
18W JELAWAT 23 Sep 2012 0600Z Location: 12.1 128.7 Winds: 90 . . . → Read More: အားကောင်းသော အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာသည့် JELAWAT
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 18W, 92W, JELAWAT, LAWIN, NW-Pacific, TYPHOON Older Entries »